Maxaa maanta ka cusub Xanuunka Coronavirus?.
Wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa xaqiijisay 14,919 xaaladood cusub oo ah cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’, iyo sidoo kale 816 geeri ah, taas oo tirada guud ee cudurrada ka dhagaysa dalkaasi ugu yaraan 233,142 – oo ah tan afraad ee ugu sarreysa adduunka, oo ka sarreysa tan Spain – halka dhimashaduna ay ku dhintey 15,633.
Dalka Burundi waxaa ka sii soconaya ololaha doorashada arbacada oo soo afjari doonta kala qeybsanaanta madaxweyne Pierre Nkurunziza iyo xukunka dhiigu ku daadatay ee 15 sano ah. Laakiin coronavirus-ka ayaa khatar ku ah codbixinta May 20-keeda, xukuumadduna waxay ceyrisay shaqaalaha Ururka Caafimaadka Adduunka ka dib markii walaac laga muujiyay.
Warbaahinta Maxaliga ah ayaa soo sheegaya in ololaha doorashada dalkaasi si caadiya u socdaan oo uusan muuqan walwalka laga qabo xanuunka,inkastoo xukumada lagu eedeeyay in ay qarinayso dadka xanuunka u dhintay iyo waliba kuwa uu soo ridanayo.
hogamiyihii hore ee Barack Obama ayaa ku dhalleeceeyay hoggaamiyeyaasha Mareykanka wax ka qabashada jawaabta coronavirus, Mr Obama oo khudbad ka jeedinayay xaflad qalin jabin ah ayaa sheegay in xaaladdan ay qeexeyso waxyaabo badan oo daahsoonaa. Waxa uuna carrabka ku adkeeyay in dadka ka mas’uulka ah dalka ay ogaayeen wax walbo oo ay sameeynayeen.
Dowlada Ruushka ayaa sheegtay in ay u ogolaaneyso ciyaartooyda shisheeye ee ku tartamaya horyaalada isboortiga ee gudaha dalkeed in ay soo galaan waxaana tirada kiisaska ‘coronavirus’ ay dhaaftay 280,000 gudaha dalkeed.
Caalamka, in kabadan 4.6 milyan oo qof ayaa cudurka qaaday in kabadan 311,000 weyna u dhinteen COVID-19, sida laga soo xigtay jaamacada Johns Hopkins. Ku dhawaad ​​1.7 milyan oo qof ayaa soo kabsaday oo markii hore ka soo bilowday bartamaha Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019.